Waa la daabacay03.05.2022
Finland waxaa doorasho lagu soo doortaa golaha degmada, golaha gobolka ee aagga nololwanaagga, baarlamaanka iyo madaxweynaha. Waxaa intaas dheer oo Finland loo codeeyaay baarlamaanka Yurub. Sida caadiga ah waxaa xaqa codeyn leh muwaadiniinta Finnishka oo dhan, kuwaas oo buuxiyay 18 sano. Inkastoo aadan ahayn muwaadin Finnish ah, waxaad lahaan kartaa xaqa codeynta ee doorashooyinka degmooyinka, doorashooyinka goboolada iyo doorashada baarlamaanka Yurub.
Doorashooyinka baarlamaanka Yurub
Wargelinta xaqa codeynta (äänioikeusilmoitus) waxaad laguugu soo wargelinayaa qiyaastii bil ka hor doorashada.
Haddii aadan helin wargelinta, la xiriir Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Wargelinta waxaa ku qoran halka aad ka codeyneyso. Haddaad codeyneyso maalinta codbixinta, waxaad ka codeyn kartaa oo keliya, goobta codeynta ee ku qoran wargelinta xaqa codeynta.
Codeynta doorashooyinkoo dhan waad codeyn kartaa inta ka horeysa maalinta codeynta, xiliga sii codeynta. Haddaad sii codeyneyso, waxaad ka codeyn kartaa guud ahaan goobaha loogu talagalay sii codeynta meel walbo oo ay uga taal Finland ama wadanka dibaddiisaba,
Marka aad codbixinta aadayso, waa in wadataa aqoonsiga.
Arrimaha muhiimka ah ee degmada waxaa go’aan ka gaara golaha degmada (kunnanvaltuusto). Xubnaha golaha degmada waxaa lagu soo doortaa doorashooyinka degmada. Doorashooyinka degmada waxaa la qabanqaabiyaa afartii sanaba mar. Tirada wakiilada degmadu waxay ku xiran yihiin inta ay dhan yihiin dadka degmada deggan.
Codkaada waad ka dhiiban kartaa doorashooyinka degmada haddii jirto 18 sano ugu dambayn maalinta doorashada. Waxaa kale oo la doonayaa in aad buuxiso mid ka mid ah shuruudahan soo socda:
Waxaad tahay muwaadin Finland, dowlad kale oo Midowg Yurub ah, Iceland ama Norway u dhashay oo guri dembo ku leh Finland.
Waxaad tahay muwaadin waddan kale waxaad guri degmo ku lahayd Finland ugu yaraan labo sano oo xiriir ah.
Waxaad xaqa codbixinta ee doorashooyinka degmada ku leedahay degmada aad guri degmo ahaan aad uga qornayd nidaamka macluumaadka dadka 51 maalmood ka hor doorashada. Haddii uu gurigaada degmo is-beddelo tan ka dib, xaqaada codbixintu wuxuu oolayaa degmadi ahayd gurigaada degmo 51 maalmood ka hor doorashada. Waxaad u codayn kartaa murashaxa degmadan oo kaliya.
Yaa musharax ahaan kara?
Waxaa musharixiinta soo magacaabi kara
xisbiyada rajistareeshinka xisbiyada ku jira
dad codbixin xaq u leh oo qof soo magacowday.
Musharuxu waa in uu ahaadaa qof,
cod bixinta doorashooyinka degmada xaq u leh,
ku leh guri-degmo degmada laga hadlayo,
aan laga aheyn mas’uul
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan doorashooyinka degmada waxaad ka heleysaa bogga Vaalit.fi ee wasaaradda caddaaladda.
Macluumaad ku saabsan doorashooyinka degmadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Macluumaadka doorashada degmooyinka oo ku qoran luqad fasiix ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Aagagga nololwanaagga ayaa laga billaabo sannadka 2023 qabanqaabinaya adeegyada sooshalka iyo caafimaadka iyo adeegyada aasaasiga ah. Degmooyinku waxay qayb ka yihiin mid kamid ah aagagga nololwanaagga oo isugeyn ah 21.
Arrimaha ugu muhiimsan ee aagga nololwanaagga waxaa go’aaminaya golaha gobolka, kaas oo xubnihiisa lagu dooranayo doorashooyinka gobollada. Tirada wakiilladu waxay ku xirantahay, tirada dadka deggan aagga nololwanaagga.
Doorashooyinka gobollada laguma qabanayo Helsinki, sababtoo ah magaalada Helsinki waxay hadda kaddib xittaa qabanqaabinaysaa adeegyada.
Codkaada waad ka dhiiban kartaa doorashooyinka gobolka ee aaggaada nololwanaagga, haddii aad jirto 18 sano ugu dambayn maalinta doorashada. Waxaa kale oo la doonayaa in aad buuxiso mid ka mid ah shuruudahan soo socda:
Waxaad xaqa codbixinta ku leedahay aagga nololwanaagga ee ay degamadaadu ka tirsantahay.
deggan aagga nololwanaagga (degmadu waxay ka tirsantahay gobolka laga hadlayo)
xaq codbixin ku leh doorashooyinka gobollada.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan doorashooyinka gobollada waxaad ka heleysaa bogga Vaalit.fi ee wasaaradda caddaaladda.
Macluumaad ku saabsan doorashooyinka gobolladaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Waa maxay aagga nololwanaaggu?Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Baarlamaanku (Eduskunta) waa unugga go’aan sameynta ee ugu muhiimsan dowladda Finland. Xubnaha baarlamaanka, xildhibaanada waxaa lagu soo doortaa doorashooyinka baarlamaanka. Doorashooyinka baarlamaanka waxaa la qabanqaabiyaa afartii sanaba mar. Doorashooyinka baarlamaanka marka lagu jiro dalka waxaa loo qeybiyay qeybo doorasho. Qeyb doorashadaada oo kaliya ayaad musharrax ka dooran kartaa. Qeyb doorasheed kasta waxaa laga soo doortaa tiro cayiman oo xildhibaano ah. Tirada xildhibaanadu waxay ku xiran tahay tirada dadka ee deggan qeybta doorashada. Xildhibaanada la doortaa waa 200 wadajirkoodu.
Waad ka codeyn kartaa doorashooyinka baarlamaanka haddii aad tahay muwaadin Finnish ah islamarkaasna aad buuxisay 18 sano ugu dambeyntii maalinta doorashada. Xaqa codbixinta waxaa sidoo kale leh muwaadiniinta Finnishka ah ee deggan dibadda.
xisbiyada rajistareeshinka xisbiyada ku jira,
dad codbixin xaq u leh oo sameystay codbixiyayaal.
Musharuxu waa in uu ahaadaa qof
cod bixinta doorashooyinka baarlamaanka xaq u leh,
aan laga aheyn mas’uul.
Macluumaad ku saabsan doorashooyinka baarlamaankaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Madaxweynuhu waa madaxa dowladda Finland. Madaxweynaha waxaa lagu soo doortaa doorashooyinka madaxweynaha. Doorashooyinka madaxweynaha waxaa la qabanqaabiyaa lixdii sano mar. Isla hal qof waxaa la madaxweyne loo dooran karaa ugu badnaan labo xilli oo isku xigta.
Doorashooyinka madaxweynaha sida caadiga waa laba qeybood. Haddii musharixiinta midkood uusan helin wareegga hore in ka badan kalabar codadka, waxaa la qabanqaabinayaa wareeg labaad. Wareegaas labaad waxaa musharixiin ka ah labada musharax ee codadka ugu badan ka helay wareegii koowaad. Qofka hela wareegga labaad codadka ugu badan ayaa loo doortaa madaxweyne.
Waad ka codeyn kartaa doorashooyinka madaxweynaha haddii aad tahay muwaadin Finnish ah islamarkaasna aad buuxisay 18 sano ugu dambeyn maalinta doorashada. Xaqa codbixinta waxaa sidoo kale leh muwaadiniinta Finnishka ah ee deggan dibadda.
Yaa musharaxa ahaan kara?
Waxaa musharixiinta madaxweynaha soo magacaabi kara
xisbiyada baarlamaanka ku leh ugu yaraan hal xildhibaan,
Murashaxa madaxweynuhu waa in uu noqdaa muwaadin asal ahaan Finland u dhashay.
Macluumaad ku saabsan doorashooyinka madaxweynahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Baarlamaanka Yurub iyo Golaha Midowga Yurub oo wadajira waxay yihiin unugga sharci-dejinta Midowga Yurub ee ugu muhiimsan. Golaha Midowga Yurub waxaa ku jira wakiilada xukuumada wadamada xubnaha ka ah. Baarlamaanka waxaa ku jira 705 xubnood, 14 kamid ahna waxaa laga soo doortaa Finland. Xubnaha baarlamaanka waxaa lagu doortaa doorshooyin. Doorashooyinka waxaa la qabanqaabiyaa shantii sano mar.
Waad ka codeyn kartaa doorashooyinka baarlamaanka Yurub, haddii aad buuxiso mid kamid ah shuruudaha hoos ku qoran:
aad tahay muwaadin Finnish ah islamarkaasna aad buuxisay 18 sano ugu dambeyntii maalinta doorashada,
aad tahay muwaadin wadan kale oo Midowga Yurub ah islamarkaasna aad buuxisay 18 sano ugu dambeyntii maalinta doorashada. Waa inaad sidoo kale guri-degmo ku lahaataa Finland maalinta 51aad maalinta doorashada kahor. Waxaa intaas dheer inaad iska diiwaangelisaa rajistareeshinka codbixinta Finland. Is-diiwaangelinta waa in Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka laga sameeyaa ugu dambeyn maalinta 80 aad maalinta doorashada kahor.
Hal dal oo kali ah ayaad kaga codeyn kartaa doorashooyinka isku midka ah.
xisbiyada rajistareeshinka xisbiyada ku jira iyo
heysta xaqa codbixinta doorashooyinka baarlamaanka Yurub,
aan mas’uul laga aheyn.
Macluumaad ku saabsan doorashooyinka baarlamaanka YurubLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa